Ọkachamara ọkachamara na-enye ndụmọdụ dị iche iche banyere SEO Precious On La Façon Iji mezie La Performance Your Site
N'eziokwu, enwere otutu ihe dị mkpa ịchọrọ mgbe ị na-emepụta weebụsaịtị. Site na ị na-emepụta nke na peeji nke iji plugins kpọmkwem, ihe niile maka la reconnaissance nke gị na saịtị na ịntanetị. Ọzọkwa, ọ dị ezigbo mkpa maka afọ ojuju nke ndị ahịa gị / ndị na-agụ akwụkwọ. Ihe a nile nwere ike ime nke ọma iji nweta search engine optimization (SEO) maka nhazi weebụ. N'ịza ajụjụ ndị ịchọta, ọchụchọ gị ga - enweta ọkwa kachasị mma n'ime nchọpụta.
Nke siri ike, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche ihu, bụ na search engines na-agbanwe ma na-agbanwe agbanwe mgbe nile ha algorithms, nke na-achọ ọrụ nke specialist, bụ nke na-adị ugbu a na ndị ọhụrụ ozi n'ime ngalaba nke référencement. Artem Abgarian, onye na-elekọta onye ahịa nke Ọkachamara akọwa ihe ị nwere ike ime iji meziwanye ọrụ nke saịtị gị.
Ịmepụta ihe oyiyi weebụ
Ị maara na ọ bụla oyiyi na gị na saịtị nwere ike ịbụ mma? Ee, ihe ị na-enye na foto na ogo nke oyiyi nwere ike niile gosipụtara a ezi omume SEO. Ị nwere ike hazie gị ihe oyiyi, na-eme ka search engine mma-tagging ọ bụla oyiyi. Mgbe search engines na-agagharị na Web, ihe oyiyi nke gị na ebe nrụọrụ weebụ ga-enyocha n'ime usoro nke nsonaazụ. Lalata nke size nke gị ihe oyiyi na-enyere gị aka ngwa ngwa na-ebugharị na Web, nke nwere ike ịdị mma na classification nke gị Web saịtị. Nye ihe oyiyi a isiokwu centré sur les mots qui ga-enyere ndị ahịa aka ịchọpụta kpọmkwem ihe ha na-achọ.
Ọ bụrụ na ị banyela n'otu ebe nrụọrụ weebụ, chọpụta na ị ga-akwụ ụgwọ maka ịbanye na saịtị ahụ? Ọfọn, ọtụtụ ndị na-ahapụ saịtị ndị a ma ọ dịghị mgbe ha na-abịa. Ị na-achọghị ka gị na ebe nrụọrụ weebụ bụ onye na ndị mmadụ na-aga n'ihu ọbụna na ha na-ahụ ihe ị offrez! Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi akụkụ nke gị na saịtị, ma ọ bụ maka ndị òtù gị, hichapụ naanị akụkụ a. Na-aga na peeji nke destination free. Wepụ ihe niile na-emeghị ihe ọ bụla, tinyere ndị na-ahụ maka mgbasa ozi, nakwa na ndị na-eme nchọgharị..
Bipụta ọdịnaya gị
Search engines na-achọ saịtị Weebụ iji gbanwee ọdịnaya ha mgbe niile ka ha nwee ike ịnye ndị ọrụ nke ozi fiables et en opportun opportun. Dị ka ndị a, Web saịtị ndị na-agbalịsi ike ịmepụta oge ha na-ebute site na algorithms. Avoir un blog bụ ụzọ na-enweghị isi ị ga-esi jide n'aka na gị na ebe nrụọrụ weebụ abụghị ihe ọ bụla maka ichebara maka ọkwa na elu.
Nhọrọ ederede URL
Nyochaa URL ịchọpụta URL na-agụnye ọrụ ndị ị na-enye n'ime URL ma ọ bụ na-ahọrọ ezigbo aha maka URL gị. Ịbanye na saịtị ma ọ bụ geographical mpaghara na gị URL nwekwara ike inyere ndị engines search to lier gị ahịa na gị na ebe nrụọrụ weebụ.
Usoro nlekota oru kachasị mma
Na Google na Google, Google nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche maka ndị na-eme nchọgharị na weebụ. Maka nke a, gị na ebe nrụọrụ weebụ ga-adị mma maka telephones mobile ma ọ bụ nwere ike ịba uru. Gị web designer ga-enwerịrị ike ịmepụta ihe ntanetị ememme nke akpadoro na telefon mobile. Echekwala na ị ga-enwekwa ngalaba nke FAQ maka ndị na-ahọrọ nyocha ọchụchọ.
Jikọọ ngwa ngwa ịwụfu
Mgbe ọ bụla na-ekwu na eme, echefula na ị na-arụ ọrụ na ngwa ngwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị. The attention of people is not so long, and therefore if your site takes a certain time to charger, the chances are that you perdez much more clients than you le thinkz. Nke a nwere ike ịbụ ihe mere na ebe nrụọrụ weebụ gị adịghị agbanwe agbanwe yana ọ kwesịrị. Nyochaa ihe niile nwere ike potentially ralentir gị na saịtị, ndị plugins na mgbasa ozi nke mgbasa ozi, na ọbụna size nke ihe oyiyi na gị na peeji nke.
Ọ bụrụ na ntinye akwụkwọ na echiche dị mkpa, echefula na ntinye aha bụ ihe kachasị mkpa nke na-emetụta arụmọrụ gị. Na-eche banyere ọganihu nke ndị ahịa de Mpempe akwụkwọ , nyochaa ntinye aka n'ime ọrụ gị nwere ike ime ka azụmahịa gị sie ike.